Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan “Madaxweyne saaxiibkey ayaa tahay, haka tagin burbur” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan “Madaxweyne saaxiibkey ayaa tahay, haka tagin burbur”
Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, Safiirka Somaliya ee Kenya ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu xilka iska wareejiyo, bedelkii uu colaad dalka ka abuuri lahaa.
Safiirka oo saaxiibo dhow ay yihiin Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay inaanu dhaxalkiisa noqon dagaal, isla-markaana uu ka fogaado colaad, burbur, kala tag iyo barakac.
Safiirka ayaa soo duubay muuqaal uu si toos ahi kula hadlayay Madaxweyne Farmaajo, oo uu ugu yeeray inaanu sumcadiisa iska xumeynin.
“Madaxweyne aniga iyo adiga saaxiibo baa nahay muddo badan, nin aan jeclahay oo wanaagsan baa tahay oo niyad wanaagsan, Ilaahay baa dadka ku jecleysiiyay. Adigoo lix bilood joogga ayaa si dulmi ah xilka lagaga qaaday, waad iska tagtay, waadna samirtay, Ilaahay wuu kuu abaal guday oo wuu ku soo celiyay adoo Madaxweyne ah. Ummaddii dhammeed Jabuuti, Somaliland, Itoobiya, Kenya iyo meel kastoo Soomaali jooggaan ayaa laga dabaaldegayay.” Ayuu yiri Safiirka.
Safiirka ayaa yiri “Ummadda, Ilaahay baa dadka jecleysiiya, haddana xaaladda uu dalka marayo waa inaad miisaantaa, karaamo ayaad ku soo gashee waa inaad karaamo uga tagtaa. Waa inaan karaamada lagaa qaadin, karaamada inta lagaa qaaday, wadankana karaamada in laga qaaday weeye. Waa inaad ka fekertaa xaaladda wadanka ka taagan.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka ay ku jiraan dad danta dadka Soomaaliyeed ka hormariyay midda shisheeye.
“Dadkani kula dagaalamaya ama ku diidan dad badanoo waxaa ku jira dowlado ajnabi ah soo hoggaaminayaan, dad dowlado ajnabi ah ay ku daneysanayaan ayaa ku jira, dad waxaa jira mushaaro ay u qoran yihiin, dad waxaa jira dhaqaale la siiyo, dad waxaa jira lacago la siiyo, dantoodee ku bedelanayaan danta ummadda Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaan ku leeyahay waxaad soo qabatay waad soo qabatay, afartii sano waa dhammaatay, waxaa la rabaa adoo karaamo leh inaad wadanka ka tagtit. Waan jeclaan lahaa inaad afar sanoo kale aad haysatit, oo jihadii aad ku socotay wadanka lagu sii wado, waxaad fahamtay wadanka meesha laga dhisaayo ciidan inuu yahay, ciidan baad dhistay, kii aad dhistaa la burburin doonnaa oo burburi doono, waqti baad haystaaa karaamo iyo sharaf wadanka uga tag.”
Tarsan ayaa yiri “Waxaan kaa rajeynayaa berrito (Sabtida) markaad Baarlamaanka tagtit in aad xilka iska dhiibtit, oo tiraahdid Soomaaliyeey afar sanaa soo shaqeeyay waxaan rabay wanaag, waxaan rabay inaan wadanka dhiso oo aragtideedaa lahaa, laakiin dad baa i diiday danaha ay rabaan hala-haadaanee, wadankii saasaa uga tagay, waa ikhtiyaarka 1aad. Ikhtiyaarka 2aad inaad tiraahdid anigu waan tartamiyee Ra’iisal Wasaaraha ha wado shaqada, doorashooyinka ha diyaariyo, anna waan tartami oo muwaadin Soomaaliyeed oo tartamaya ayaan ahay, qof kuu diidi karo malahan.
Markale ayuu yiri “Haddii leesku dayo ciidankii aad dhistay in magaalada lagu burburiyo, arrintaasi sharaf xumo ayay noqonaysaa, haka tagin burbur. Waxaad tiri aniga waxba ma burburiyo ee waxbaan dhisaa, waa runtaa dhis wax, dhismada waxaa ka mid ah markii lees khilaafo ninka go’aanka qaraar qaata oo dadka oo dhan aynaan ka fileynin, go’aan ragganimo leh qaado, Walaahi inaanan la dhaheynin waa laga adkaaday. Qof kasta ajnabi ha ahaado, gaaladaan hadda is abaabuleysa ha noqoto, wadamadaan hadda laga soo abaabuli rabo ha noqoto, mid kasta wuxuu ku haysan doonnaa inaad hoggaamiye dhaba tahay.”
Tarsan ayaa ku celceliyay in Madaxweynuhu ka fiirsado xaaladda taagan, isla-markaana aanu ku deg-degin dagaal.
“Ka fiirso, haku deg-degin dagaal inaad gashid, dagaal faa’iido maleh, magaaladaasi yuusan dagaal ka dhicin, dhaxalkaaga haku dambeysiin dagaal, burbur, kala tag iyo qax. Waan kula talinayaa, ayadoo ay niyad fiican iga tahay waxaan kugula talinayaa waad arkeysaa meesha ay xaaladda mareyso, waa khasab inuu qof sabraa. Qolooyinkan waa badan yihiin waxaana laga yaabaa isku ra’yi inaanay ahayn, hal ra’yi malahan, laakiin adigu hal ra’yi baad leedahay, ayagu waxba inaanay isku raaci karin baa laga yaabaa, laakiin adigu keligaa go’aanka adaa iska leh.” Ayuu yiri Tarsan.
Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan “Madaxweyne saaxiibkey ayaa tahay, haka tagin burbur” was last modified: May 1st, 2021 by Admin
Wabiga Shabelle oo ka fatahay deegaano ka tirsan degmada Jowhar
Xuska Maalinta Shaqaalaha Dunida ee 1-da May (Faallo)
Puntland oo amartay in albaabada la isku laabo xafiiska guddiga doorashooyinka Soomaaliya
Dhageyso:-Bare Saxaafaded oo Ka Sheekeeyey Saxaafada Waxey Tahay iyo Waxa Looga Baahan yahay